अछाम १०, माघ । अछामको साँफेबगर नगरपालिका–३ डिक्रेनीको मष्टामाडाँै प्राथमिक विद्यालयमा पछाडिपट्टि मष्टा देवताको मन्दिर छ । ५० जना अध्ययनरत विद्यालयमा दुई शिक्षिका र दुई शिक्षक छन् । छाउ भएका बेला शिक्षिका महिनाको चार दिन विद्यालय जाँदैनन् । एक महिनामा विद्यालयको ४ दिनको पढाइ छुट्ने गर्छ । विद्यालय
काठमाडौँ । माघ शुक्ल पञ्चमीका दिन मनाइने ‘श्रीपञ्चमी’ पर्व सोमबार विद्याकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वतीको निष्ठापूर्वक पूजा–आराधना गरी मनाइँदैछ । चन्द्रमाजस्तो गोरो वर्ण भएकी तथा हातमा वीणा र पुस्तक लिएकी विद्याकी देवी सरस्वतीलाई भक्तजनले भारती, शारदा, हंसवाहिनी, जगन्माता, वागिश्वरी, कौमारी, वरदायिनी,
चाबहिल स्तुपामा एकाविहानै प्रहरीले भेट्टायो नवजात शिशु
काठमाडौं ४, माघ । प्रहरीले काठमाडौंको चाबहिल स्तुपा नजिक एकाबिहानै झोलामा राखेर फालिएको अवस्थामा एक नवजात शिशु फेला पारेको छ । बिहीबार विहान स्तुपा नजिकै फोहोर फाल्ने ठाउँमा झोलाभित्र राखेर फालिएको अवस्थामा शिशु फेला परेको महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीले जनाएको छ । रोइरहेको अवस्थामा फेला पारिएको
नुवाकोट । माघे सङ्क्रान्ति पर्वको अवसरमा आज नुवाकोटको तीन स्थानमा ४० हल गोरु जुधाउन लागिएको छ । ऐतिहासिक, धार्मिक र सामरिक महत्व बोकेका स्थान तारुका, बेत्रावती र पञ्चकन्यामा आयोजना गरिएको गोरु जुधाई मेलामा किसानले पालेका ४० हल गोरु प्रतिस्पर्धा गराउन लागिएको हो । ‘तारुकाको पौरख, नेपालको गौरव’ नारासहित
सिक्लेसको माघे संक्रान्ति मेला घाँटु र ठेलो
बसन्तकुमार श्रेष्ठ कास्की जिल्लाको सदरमुकाम पोखराबाट २६ कि.मि. पर अन्नपूर्ण र लम्जुङ हिमालकोे काखमा रहेको सुन्दर गाउँको नाम हो चिलिनास अर्थात् सिक्लेस । यहाँ ४ सयभन्दा बढी घरधुरी रहेको छ । सबै भन्दा ठूलो गुरुङ गाउँ सिक्लेस पहिले पार्चे गा.वि.स.को वडा नं.५,६,७,८ र ९ वडाको राजनैतिक रेखाभित्र अटाएको थियो
काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी संघले शुक्रबार काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालय घेराउ गर्ने भएको छ । स्वच्छ काठमाडौंको लागि भन्दै नेविसंघको पौडेल पक्षीय टोलीले शुक्रबार १२ बजे बागदरबार स्थित काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालय घेर्ने कार्यक्रम रहेको नेविसंघले जनाएको छ । विद्यार्थी नेता मोती भण्डारीको
काठमाडौ २६, पुस अदालतले डा. केसीलाई उनको शारीरिक र मानसिक अवस्थाका बारेमा पनि प्रश्न सोधेको छ । सवाल १ः हजुरको बाजे, बुबाको नाम थर वतन र हजुरको नाम थर बतन र पेशा व्यवसाय खुलाई दिनुहोस् र ? जवाफः मेरो हजुरवुबाको नाम नरबहादुर, बुबा उदयबहादुर र मेरो नाम डा। गोविन्द केसी हो । पेशाले चिकित्सक हुँ । वर्ष ६१ को भएँ
डा. केसी विरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा, पक्राउ गरी अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश
काठमाडौ २५, पुस सर्वोच्च अदालतले डाक्टर गोविन्द केसीलाई अदालतको अपहेलना गरेको भन्दै अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश डम्मरबहादुर शाहीको एकल इजलासले भोलि मंगलवार बिहान ९ बजे उपस्थित गराउन गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई आदेश दिएको हो। सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत नेत्रबन्धु
दाने बोहरा/हुम्ला कार्यालय प्रमुख नुहँदा हुम्लाका सरकारी कार्यालयहरु निमित्त र कार्यालय सहयोगीका भरमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । चिसो बढेसँगै कार्यालय प्रमुख तराइ र काठमाडौंतिर लागेपछि जिल्लाका अधिकांश कार्यालयको काम प्रभावित भएको छ । जिल्ला ३५ सरकारी कार्यलय मध्ये जिल्ला वन कार्यालय , कृषि , पशु ,
चिसो बढ्यो, काठमाडौंको तापक्रम १ डिग्री, जुम्लाको माइनस ६ पुग्यो
काठमाडौ २०, पुस काठमाडौको न्यूनतम तापक्रम एक डिग्रीमा झरेसँगै आज यस वर्षकै बढी चिसो महसुस गरिएको छ । काठमाडौको आजको न्यूनतम तापक्रम १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियस रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । यसअघि बुधबार काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम २ दशमलव २ डिग्रीसेल्सियस थियो । ‘काठमाडौ मात्र हैन देशैभर
मिलन बिक्रम सिंह बस्नेत भोजपुर १९, पुस । भोजपुर षडानन्द नगरपालिकाका इन्जिनीयरले भुकम्प पीडितसँग घरको नक्सा बनाए बापत रकम असुल्ने गरेका छन् । नगरपालिकाका इन्जिनीयर बिमलमान राईले बिएनएम कन्सलट्यान्सीसँगको मिलेमतो गरेर रकम असुल्ने गरेका हुन् । घरको नक्सा बनाए बापत १० हजार लाग्ने भन्दै उनले भुकम्प
१३ वर्षिय बालक ९ महिनादेखि वेपत्ता,प्रशासन मौन
हुम्ला १८, पुस । दाने बोहरा हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटबाट गत वैशाखमा हराएका १३ वर्षे बालक विजय रावल अहिलेसम्म अज्ञात छन् । घर परिवारले उनको खोजीका लागि जिल्ला प्रशासनलाई गुहारेपनि प्रशासनले कुनै पहल गरेको छैन् । खार्पुनाथ गाउँपालिका २ राया गाउँ निवासी जैदन रावलका छोरा स्कुल पोशाक ल्याउने भन्दै सिमकोट
नयाँ बर्ष २०१८
काठमाडौ १७, पुस अग्रेजी नयाँ वर्ष २०१८ आजबाट सुरु भएको छ । जिजस क्राइस्टलाई फाँसी दिएपछि इस्वी संवतको शुरुवात भएको हो ।अंग्रेजी नयाँ वर्ष पछिल्लो समय युरोप र अमेरिकासँगै विश्वका अधिकांश देशहरुमा मनाउन थालिएको छ । सन्मा सौरमासको गणना हुने तर चान्द्रमासको गणना नहुने भएकाले ज्योतिष शास्त्रअनुसार यो वैज्ञानिक
काठमाडौ १६,पुस सन् २०१७ पनि अघिल्ला वर्षहरुझैँ धेरै उतार चढावका साथ विदा हुँदैछ । अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपतिका रुपमा डोनाल्ड ट्रम्पले पद बहाली गरेसँगै सुरु भएको विश्व राजनीतिको चर्चामा यसवर्ष पनि अमेरिका नै रह्यो । यसवर्ष सबैभन्दा धेरै राष्ट्रपति ट्रम्प नै विवादमा आए । उनले माफी माग्नेदेखि चेतावनी
काठमाडौ १६,पुस प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मजदूरको न्युनतम मासिक ज्याला रु १५ हजार तोक्नुपर्ने बताउँदै त्यसका लागि सरकारले पहल गर्ने बताएका छन् । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रको आइतबार राजधानीमा ‘चौथो राष्ट्रिय ट्रेड युनियन सम्मेलन’ उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले अहिले सरकारले
सासंदले नै ऋण नतिरेपछि
काठमाडौ १२, पुुुस रुकुम पश्चिमबाट निर्वाचित एक सांसदलाई कृषि विकास बैंकले ऋण चुक्ताको लागि मंगलबार सार्वजनिक सूचनामार्फत आग्रह गरेको छ । जिल्लाको प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र नं १ ९क० बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य रातो कामीलाई जिल्ला कृषि विकास बैंक, रुकुमले ऋण भुक्तानीका लागि सार्वजनिक सूचना आह्वान
काठमाडौ १२,पुस विश्व सम्पदामा सूचीकृत पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा मंगलबार सवारीसाधन प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा र काठमाडौं महानगरपालिकाको समन्वयमा सवारीसाधन प्रवेशमा रोक लगाएको हो। कोषले गत भदौमा पशुपति क्षेत्रको कोर एरियामा सवारीसाधन
शोकलाई शक्तिमा बदल्न सफल गाइपालक बाबुराम
काठमाडौं ११, पुस । सरस्वती ढुङ्गाना/नारायणी लामिछाने खेलमा हारजित जस्तै व्यवसायमा पनि नाफा–घाटा निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । व्यवसाय घाटामा गएपछि घरबारी नै बेच्नु परेका थुप्रै उदाहरण छन् । गत असारमा त्यस्तै अवस्था आइलागेको थियो सुन्दरीजलमा गाइपालन व्यवसाय गर्दै आएका बाबुराम कार्कीलाई । तर,उनको
काठमाडौ, १० पुस सर्वोच्च अदालतले एनसेलको शेयर खरिदमा लाभकर नतिरेपछि लाभांश विदेश लैजान लगाएको रोक खुल्ला गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलाशले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिदमा लाभकर नतिरेपछि लाभांश विदेश लैजान लगाएको रोक खुल्ला गर्न अन्तरिम
फिलिपिन्समा आँधि १ सय ८० भन्दा बढिको मृत्यु
फिलिपिन्समा शुक्रबार आएको ‘टेमबिन’ नामक आँधीमा परी मृत्यु हुनेहरुको संख्या १ सय ८० नाघेको छ । फिलिपिन्सको दोस्रो ठूलो टापुका रुपमा चिनिने मिन्दानाओमा आएको सो आँधीका कारण अरु कैयौं बेपत्ता भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।आँधीका कारण ५० हजारभन्दा बढी विस्थापित भएका छन् । उनीहरुले केही शव बाहिर निकालेका
वीरगञ्जको ग्यास उद्योगमा आगलागीमा २ को मृत्यु
काठमाडौ ५, पुस वीरगञ्ज महानगरपालिकाको पटेलनगरमा रहेको सुपर ग्यास उद्योगमा भीषण आगलागी भएको छ ।आगलागीमा परी दुईजना अग्नि नियन्त्रकको मृत्यु भएको छ । जलेर गम्भीर घाइते भएका दुई जनालाई हेलिकोप्टरमार्फत उपचारका लागि काठमाडौं पठाइएको छ । आगो नियन्त्रणका लागि गएको वीरगञ्ज महानगरपालिकाको एउटा दमकलसमेत
तराईमा हुस्सु, काठमाडौ चिसो
काठमाडौं २, पुस । तराईका अधिकांश जिल्लामा बिहानैदेखि बाक्लो हुस्सु लागेसँगै चिसो बढेकाले जनजीवन प्रभावित भएको हो । ती जिल्लामा आज दिनभर नै बाक्लो हुस्सु लाग्ने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाले शीतलहरको औपचारिक घोषणा भने गरेको छैन । बारा, पर्सा, रौतहट, सिरहा, सप्तरीलगायतका
चामलसँग खुसी साट्न वाध्य हुम्लाबासी
हुम्ला २८, मंसिर,दाने बोहरा । देश चुनावी सरगर्मीले तातेको छ, वाम गठवन्धन नयाँ सरकार गठनको तयारीमा छ,तर विकट कर्णालीको हुम्लाबासी भने सधै एउटै समस्याबाट थलिएका छन् ‘चामल’ । नेपाल खाद्य संस्थान हुम्लाले लामो समयपछि विहीबार चामल वितरण गरेपछि हुम्लीबासीमा खुसी छाएको छ । नेपाल सरकारले लामो समय देखि
एक्सप्रेस मार्टको लक्की ड्र विजेता रोशन
काठमाडौं १७, मंसिर । यसपालीको एक्सप्रेस मार्ट लक्की ड्र विजेता रोजन ज्ञवाली बनेका छन् । १ वर्ष अघि सञ्चालनमा आएको मार्टले हरेक सामान किन्दा ग्राहकलाई कुपन दिन्छ । त्यही कुपन लक्की ड्रमा यो पटक काठमाडौं मित्रपार्कका ज्ञवाली विजेता बनेका हुन् । मार्टका अध्यक्ष फणीन्द्र पाण्डेले उक्त पुरस्कार काठमाडौंको
सडक सफा राख्न ब्रुमर लगाउँदै महानगरपालिका
काठमाडौं महानगरपालिकाले राजधानीको मुख्य सडक सफा राख्न ब्रुमर लगाउने भएको छ । पहिलो चरणमा टुँडिखेल वरपर त्यसलगत्तै राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री निवासलगायत स्थानमा ब्रुमर लगाउन लागेको हो । राजधानीको सडक धुलाम्य भएको आरोप खेपिरहेको कमपाले पहिला टुँडिखेल क्षेत्रवरपर धुलोमुक्त बनाएर अन्य स्थानमा